खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई किन लाग्यो यति ठूलो झट्‌का ? (भिडियोसहित) – HKNepal.com – हङकङबाट सञ्चालित पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
धेरैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। गत साता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समाचार भाइरल भयो। प्रचण्डको अमेरिकी भ्रमणको बेला उनीविरुद्ध एक नेपालीले गरेको उजुरीको समाचारले निकै चर्चा पायो। त्योसंगै प्रचण्डका बुहारी विना मगरका पूर्वपति पक्राउ परेको समाचारले निकै चर्चा पायो।
प्रहरीले प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसंगै ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरका पूर्वपति शंकर अधिकारी पनि रहेको खुलासा भएको हो। शंकरसहित हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मराज राजबहाक, रामकृष्ण खतिवडा, विजय श्रेष्ट, ललित तामाङ, देव घिमिरे, सञ्जिव कार्की र लोकेन्द्र खड्का प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
८४ दिनसम्म हाजिर नगरेपछि डा. गोविन्द केसीको तलव रोक्का
अम्बिका गुरुङको ‘तिमीले भन्दा’ सार्बजनिक